Ntuziaka Blog: Nka na ụzụ | Martech Zone
Na-esote na ndepụta maka ntinye blọọgụ bụ onye na - agụ ihe ọzọ na - agbakwunye ụda nkọwa na blọgụ m, Nka na ụzụ ọkọ. Ọ dịghị onye kwesịrị ileda uru okwu dị na blọọgụ (ụfọdụ na-arụ ụka na blọọgụ abụghị blọọgụ na-enweghị ikwu!).
Nka na ụzụ ọkọ na-eme ememme ncheta ọmụmụ ya nke mbụ! Ndeewonu !!!
Iji atụmatụ kọlụm, gbaa mbọ tinye ọdịnaya div na nke mbụ na html gị (ebe a ka nwere ike ime ka ọ bụrụ mpaghara mpaghara etiti. Ihe kpatara nke a bụ na Search Enjini anaghị arụpụta ọdịnaya niile nke ibe ahụ, ha sere otu peeji nke bido na elu Site na idowe html nke aka ekpe tupu e tinye ya na html, i nwere ike idenye ihe edere na sidebar gi karia iduu gi!
Itinye ihe eserese maka aha Blog gị dị mma - mana gbaa mbọ ka nwee ederede metụtara ya na Englọ Ọrụ Nchọgharị nwere ike iri ari. Jide n'aka na ị gụrụ # 2 na ntinye aka m maka Blogger Blogger. Ọ na-ewepụta HTML dị mkpa na mkpado ụdị iji tinye aha blọgụ gị na isiokwu ya.
Ka akụkụ nke ibe ahụ dị nfe, ka ọ na-adọtakwu ya n'aka onye na-agụ ya. Inwe ọbụna obere ụcha ọdịiche dị n’etiti ogidi ga-enyere ndị mmadụ aka gụọ ogidi ndị dị nfe… ma hụ na ọdịnaya kachasị dị mkpa bụ nke kachasị mfe ga-adọrọ uche gaa na ọdịnaya ahụ. Echere m na m ga-anwale ụfọdụ nkụnye eji isi mee, sidebar na peeji ndabere shading - ọ bụrụgodị na ọ dị obere. Nke a abụghị ihe enwere ike ịlele anya, mana enwere ọtụtụ ọmụmụ na njiri mara ebe nrụọrụ weebụ na-enye nzaghachi a.
Imirikiti ndị mmadụ amataghị ya, mana ị nwere ike ịwe wijetị na ụdị a na-ewepụ na saịtị ọzọ. Ọ bụ naanị okwu ịchọpụta nhazi na mkpado klaasị ha na-eji. M na-eji FireBug maka Firefox iji chọpụta otu ha si eme ya - tinye tinye mkpado na ụdị na mpempe akwụkwọ m nke ọma.
Agba nke mkpụrụ edemede gị (# 4c8ac9) bụ nnukwu ndo na-acha anụnụ anụnụ. Agbanyeghị, itinye ya na aha post gị yana peeji ndị ọzọ anaghị egosi ọdịiche dị n’otu njikọ nke ọzọ. Can nwere ike iji a ngwá ọrụ dị ka Kuler ịchọta ekele na agba na ndo. Nke a bụ otu maka gị (# 234F7D) nke ahụ bụ ntakịrị ọchịchịrị karịa ndo gị na-acha anụnụ anụnụ ma na-aja ya mma. Iji Kuler, họrọ 'Mepụta' ma tọọ etiti agba HEX ego. I nwere ike igwu egwu na aro ha ma obu dozie onwe gi site na iji ngwa ha. Ọ na-atọ ụtọ mgbe ị malitere.
Nke ahụ bụ ya maka nke a tipping! Daalụ maka inye m ohere iji lebanye anya na blọgụ gị, Nka na ụzụ! A na-akwado blọọgụ a nke ukwuu maka ndị gị na ndozi Akụrụngwa, ịhụnanya maka Linux - ma ọ bụ ndị chọrọ ịmụtakwu banyere ịgha ụgha na blọọgụ ha.
Tags: ntinye ederedendụmọdụ blogoko oru
Jul 14, 2007 na 5:57 PM
Enwere m ịhụnanya maka usoro ọhụụ gị na ntanetị ntanetị, Doug.
Jul 14, 2007 na 7:46 PM
Daalụ nke ukwuu, engtech! O siri ike ịwepụta ihe mbụ, mana ọ na-atọ ụtọ igwu ala ma rụọ ọrụ ahụ.
Jul 15, 2007 na 1:07 PM
Daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge iji nyochaa blọgụ m. A na-enwe ekele maka nzaghachi a.
'Ve buliela ezigbo isi okwu. Echeghị m banyere font ma ọ bụ ndabere na agba tupu. Aga m eleba anya na nke ahụ.
M na a na-achọ gbanwee isiokwu m nwa oge ugbu a, ọ ga-abanye n'ụgbọ gị niile ị na-ekwu. Aga m edebe gị na mmepe.
Jul 15, 2007 na 2:18 PM
Bet nzọ! Na - ee - biko biputere na nmepe.
Daalụ, Nka na ụzụ ọkọ!